7 Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Mawduucyada Dhiirrigelinaya Aaminaadda iyo Wadaagga | Martech Zone
Mawduucyada qaar waxay u muuqdaan inay sifiican uga shaqeeyaan kuwa kale, iyagoo ku guuleysta saami badan iyo beddelaad badan. Mawduucyada qaar ayaa la booqdaa oo lala wadaagaa in ka badan, iyagoo keenaya dad badan oo cusub sumaddaada. Guud ahaan, kuwani waa qaybaha ka dhaadhiciya dadka in astaantaadu leedahay waxyaabo qiimo leh oo la sheego iyo fariimo ay jeclaan lahaayeen inay la wadaagaan. Sideed u kobcin kartaa joogitaanka khadka tooska ah ee internetka oo ka tarjumaya qiyamka guuleysta kalsoonida macaamiisha? Xusuusnow tilmaamahan markaad farsameynayso istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay:
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loogu guuleysto kalsoonida macaamiisha suurtagalka ah waa in la muujiyo, haddii ay ku doortaan, inay ku jiri doonaan gacmo karti leh. Abuur nuxur muujinaya in aad si dhow ula socoto warshadahaaga. Qor qoraallo ku saabsan dhaqammada ugu wanaagsan ee ugu dambeeyay. Sharax sababta mid ka mid ah hanaanku uga sarreeyo kan kale. Abuur maqaal liis ah oo muujinaya khaladaadka guud iyo sida looga fogaado. Noocyada noocan oo kale ah waxay muujinayaan rajadaada inaad ogtahay waxaad ka hadlayso iyo in lagu aamini karo inaad wax wanaagsan u qabato iyaga.
Abuur Mawduuc ka jawaabaya Baahiyaha Akhristayaasha
Markii dadku bilaabaan inay eegaan waxa ku jira boggaaga, badanaa waa sababta oo ah waxay leeyihiin su'aal gaar ah oo ay doonayaan in looga jawaabo. Abuur waxyaabo ka jawaabi kara su'aalaha rajadaada kana caawin kara iyaga go'aaminta sida loo xalliyo mashaakilkooda. Tusaale ahaan, waxay u badan tahay in qof ay la soo deristo arrimo ku saabsan qaboojiyaha ay u badan tahay inuu akhriyo sababaha guud ee qaboojiyaha si uu u joojiyo afuufidda hawo qabow ka hor inta aysan billaabin inay isku dayaan inay doortaan shirkadda HVAC inay u soo baxdo oo ay u adeegto nidaamkeeda. . Adiga oo ah ka jawaabida su'aasheeda, waxaad muujisay khibradaada iyo rabitaankaaga inaad ka caawiso arinta.
Dadku waxay u badan tahay inay ku kalsoonaadaan sumad bixisa jawaabaha su'aalaha guud si toos ah oo waxtar leh, iyadoon shaqsiyan loo rogin tan maadooyin ah si loo helo wax yar oo ay u baahan yihiin. Adoo siinaya macaamiishaada waxa ay u yimaadaan bartaada si ay u helaan, waxaad ka dhigi kartaa mid aad ugu dhow, haddii ay u baahan yihiin wax soo saar ama adeeg, taada ayaa noqon doonta midka ay iyagu doortaan.
Kaliya ha u sheegin iyaga; Tus iyaga
Hubso inaad kaydin karto wixii sheegasho ah ee aad sheegato. Tusaale ahaan, kaliya ha dhihin waxaad leedahay heerka ugu tartamida badan ee deegaankaaga. Abuur jaantus ama jaantus isbarbardhigaya qiimahaaga kuwa kula tartamaya '. Dib ugu kaydi sheegashada qanacsanaanta macaamiisha sare ee xigashooyinka markhaatiyada ka imanaya macaamiisha faraxsan. Sheegasho madhan oo aan lahayn wax gadaal ah waxay u badan tahay in la iska indhatiro ama, ka sii darran, si ay akhristaha u dareento shaki. Haddii aad awoodo inaad ku taageerto sheegasho kasta oo aad ku sameyso caddeyn, waxay taasi muujineysaa inaad daacad tahay oo aad u qalanto kalsoonidooda iyo ganacsigooda.
Tus Akhriste Inaad Dhageysaneysid
Warbaahinta internetka waa dabeecad bulsheed. Dhammaanteen waxaan leenahay sanduuqyadeenna saabuun, haddii dhagaystayaasheena ay yihiin koox kumanaan ah ama koox yar oo qoys iyo saaxiibbo ah. Markaad internetka wax ku soo dhigto, waxaad ku jirtaa wadahadal. Muuji rajadaada iyo macaamiishaada inaad dhageysato sidoo kale markaad hadlaysid.
La soco kanaalkaaga bulsheed si aad u sheegto magacaaga. Akhriso faallooyinka boggagaaga. Eeg waxa dadku ku faraxsan yihiin iyo, ka sii muhiimsan, waxa aysan ahayn. Markay ku habboon tahay in sidaas la sameeyo, wax ka qabto walaacyada macaamiisha ee ku jira boggaaga ama kanaaladaaga isku xidhka bulshada. Markay dadku arkaan in summaddu ay jawaab celin tahay, waxay u badan tahay inay dareemaan ammaan aaminidda astaamahaas ganacsigooda.
Soo bandhig Cadeynta Bulshada
Markii aan aragno in kuwa kale, ama ay yihiin dad aan shaqsiyan naqaanno iyo in kale, ay khibrad fiican u leeyihiin astaan, waxaan u badan tahay inaan ku kalsoonaanno hadalladooda marka loo eego sheegashada astaanta lafteeda. Ku dhiirrigeli isticmaalayaasha inay ka baxaan dib u eegista oo ku soo qaadaan kuwan mawduucaaga markay habboon tahay. Faallooyinkaan ka imanaya macaamiisha dhabta ah waxay ka dhigi karaan kuwa kale inay dareemaan raaxo badan qaadashada oo ay ganacsi kula sameystaan ​​astaantaada.
BuzzSumo ayaa la falanqeeyay 2015 fariimaha ugu fayriska badan shabakadaha ay ka mid yihiin Twitter, Facebook, iyo LinkedIn. Iyo, kuwa ugu caansan waxay ahaayeen kuwa ay kujiraan waxyaabo qiiro leh. Dadku waxay si wanaagsan uga falceliyeen qoraalladii ku lug lahaa sheekooyinka qalbiga ka farxiya iyo sheekooyinka wanaagsan ee ku saabsan dadka. Waxay sidoo kale u badnaayeen inay wadaagaan sheekooyin muran dhaliyay ama naxdin leh.
Markaad u abuureyso nuxurka meheraddaada, ka feker habka bixinta gaarka ah ay u dareemi karto akhristayaashaadu. Miyay u badan tahay inay xiiso leeyihiin ama maaweelinayaan? Dad ma ku tilmaami doonaan sheeko? Noocyada falcelinta ee noocan ahi waxay ka dhigayaan waxyaabaha aad soo bandhigto inay dareemaan inay yihiin kuwo ku habboon oo shakhsi ah. Kuwani waa noocyada sheekooyinka ay u badan tahay inay helaan faallooyin iyo wadaag.
Samee Shakhsi ahaan
Sumaddaadu ma la shaqaysaa macaamiisha shaqsiyaadka ah ama ganacsiyada yaryar? Ma jiraan macaamiil sheeganaya in alaabadaada ama adeegyaduba ay si weyn ugu faa'iideysteen iyaga? Ma leedahay macaamiil aan caadi ahayn oo iyagu naftooda u gaar ah? Tixgeli inaad abuurto fiidiyow ama qoraal ku saabsan sheekooyinka macaamiishaas. U fiirsashada shaqsiyeed waxay dadka siisaa qof ay xiriir la yeeshaan. Si daruuri ah uma arki doonaan sheygaaga noloshaada haddii aad iyaga siiso liistada astaamaha. Markaad muujiso sida ay u caawisay ama u wanaajisay waxqabad maalmeedka qof, waxaad ka caawin kartaa macaamiishaada inay arkaan sida sheygaagu faa'iido ugu yeelan karo iyaga.
Markii waxyaabahaaga la wadaago, waxaad ku horkeeneysaa astaantaada macaamiisha suurtagalka ah ee laga yaabo inaysan si kale u arkin. Oo, waxaad heleysaa caddeynta bulshada ee ka timaadda talobixin shaqsiyeed. Dadka badankood aad ayey u kala garanayaan markay tahay waxyaabaha ay wadaagaan. Si kastaba ha noqotee, saamigaasi waa oggolaansho aan toos ahayn oo ah waxa ku jira waxa ku jira. Adoo abuuraya waxyaabo kicinaya xiisaha iyo shucuurta adigoo muujinaya in astaantaadu u qalanto fiiro gaar ah iyo kalsoonidooda, waad kordhin kartaa saamiyadaada, waxaad dhisi kartaa xiriiro adag waxaadna arki kartaa faa iidada nuxurka ee badalaya.
Tags: Content Suuqsaamiyadadareenkakhibradkordhinta saamiyada bulshadakordhin kalsoonidadhiirrigeliso kalsoonidhagaystoshakhsiyeedsharetuscaddayn bulshou sheegkalsooni
Alex Membrillo waa agaasimaha guud ee Xalka Shabakada Cardinal, abaalmarin ku guuleysatey hay'ad suuq geyn suuq geyn ah oo fadhigeedu yahay Atlanta, GA. Waxaa loogu magac daray Ururka Teknoolajiyadda Georgia (TAG) ee Suuqgeynta Dijital ah ee Sanadka 2015, qaabkiisa cusub ee suuqgeynta dhijitaalka ah wuxuu wax ka beddelay warshadaha oo wuxuu natiijooyin wax ku ool ah u keenay macaamiisha dhammaan cabirrada iyo suuqyada Cardinal-ka ayaa 3-jeer oo xiriir ah loogu magacaabay Inc. 5000 liistada shirkadaha xawaaraha sare ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Mareykanka ee sida xawliga ah u kora.